Rock Social Media na 30 Nkeji ụbọchị | Martech Zone
Nkume Social Media na 30 Nkeji ụbọchị
Fraịde, Machị 29, 2013 Douglas Karr
Anyị nwere ọtụtụ ndị na-eso ụzọ na mgbasa ozi mgbasa ozi ma anyị na-ekerịta ma na-aza ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na ndị na-ajụ mmekọrịta dị iche iche. Anyị bụ ndị otu obere otu, naanị mmadụ ole na ole, mana echere m na anyị na-arụ nnukwu ọrụ nke inyere ndị na-agụ akwụkwọ anyị aka ụbọchị niile na ịzaghachi ha n'oge kwesịrị ekwesị. Nke ahụ kwuru… ọ bụrụ na ihe niile anyị mere bụ ileba anya, zaghachi na ịkekọrịta na mgbasa ozi mmekọrịta ụbọchị niile ejighị m n'aka na anyị ga-arụ ọrụ ọ bụla nke ndị ahịa anyị chọrọ ka anyị mee! Ha na-akwụ ụgwọ ha ụgwọ ebe a.
Anyị na-eme nke ahụ site na iji nchịkọta nke nnukwu ngwaọrụ. Ọ bụ otu n’ime ihe mere m ji enwe mmasị ịde blọgụ a. Nchọpụta nke ngwaọrụ dị ọnụ ala nke na-enyere ụlọ ọrụ anyị aka nyochaa, zaghachi ma too ndị na-ege anyị ntị bụ isi ihe na-aga nke ọma n'ịzụ ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta anyị.
A na-emeri na-elekọta mmadụ media atụmatụ bụ ihe niile banyere-arụ ọrụ echeta, bụghị ike. Ọ gwụla ma ị bụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ, ihe niile ị chọrọ iji mee ka mmekọrịta gị na mgbasa ozi bụ 30 nkeji kwa ụbọchị. Site na ngwa ngwa akpaaka dị ka Pardot iji lekọta ọtụtụ ọrụ na-ewe oge yana ugboro ugboro, ihe niile ị chọrọ bụ atụmatụ akọwapụtara nke ọma kwa ụbọchị yana ọzụzụ onwe onye. Site na Pardot's infographic n'okpuru, Nkume Social Media na 30 Nkeji ụbọchị.
Tags: Atụmatụ 30 nkejimgbagharagbaghara ahịa akpaakaatumatu mgbasa ozi
Mindmapping 101: Mkpụrụ Mindmapping